အွန်လိုင်း ဂျလေဘီ – Unfriended (2014) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computer & Cell Phone » အွန်လိုင်း ဂျလေဘီ – Unfriended (2014)
အွန်လိုင်း ဂျလေဘီ – Unfriended (2014)
Posted by ဇီဇီ on Aug 15, 2015 in Computer & Cell Phone, Computers & Technology, Creative Writing, Entertainment, Movies/TV | 16 comments
ရေးချင်တာတော့ အေအိုင် အကြောင်းရိုက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေ စု ညွှန်းတဲ့ ပို့(စ) အကြီး တစ်ပုဒ် ရေးချင်တာ။
စာပြန်ဖတ်ရမှာရော၊ ရုပ်ရှင်တွေက စုံအောင် မကြည့်ရသေးလို့ရော မစနိုင်သေးဘူးး
အေအိုင် မလာခင်ကို ဖဘ ကြီး ရဲ့ အော်တို အလုပ်လုပ်ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်မှာလန့်နေတုန်း ဒီ ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်မိပြီး ပိုကြောက်သွားသလိုပဲ။
Rating 5.4/10 IMDb
သရဲကားမို့ ယုတိ ရှိမရှိ က နောက်မှပေါ့နော့။
ဝက်ဆိုက်တွေရဲ့ ဆက်စပ် အလုပ်လုပ်ပုံတွေ အကြောင်း ခပ်ပါးပါးသတိထားမိရင် အွန်လိုင်းမှာလည်း အနေအထိုင်ဆင်ခြင်သင့်တယ် ဆိုတာလေး သတိချပ်မိရတာပေါ့။
ဇာတ်လမ်းက သူငယ်ချင်းတွေ မူးရူးပြီး ပုံပျက် ပန်းပျက် ချီးထွက် သေးထွက် တဲ့ ဗီဒီယို တစ်ခု ဖေ့ဘုတ်ပေါ် ရောက်ရာက…
အတင်ခံရတဲ့ မိန်းကလေးက ရှက်ပြီး သတ်သေသွားပါတယ်။
ကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်း အွန်လိုင်းက တစ်ဆင့် လုပ်ကြံ လက်စားချေတဲ့ ကားပါ။
ရိုက်ထားပုံက မင်းသမီးရဲ့ ရဲ့နေရာကနေ သူရဲ့ ကွန်ပြူတာကို မြင်နေရတဲ့ အနေအထားနဲ့ တစ်ကားလုံးရိုက်သွားတာပါ။
ကျနော်ဆို ပီစီနဲ့ ကြည့်ရင်း ယောင်ယောင်ပြီး မောက်(စ) ကို လှုပ်ရှားမိတဲ့ထိဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့် ပီစီရှေ့ထိုင်ပြီး အဲဒီဖြစ်ရပ် ကြုံနေတဲ့ အတိုင်းပဲ။
ဖုန်း၊ ပီစီ နဲ့ ကိုယ့် အကောင့်တွေ မှန်သမျှ ကိုယ် က Access and used to ဖြစ်နေတဲ့ ဘဝမို့
When I gradually know how smart they can work, ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး သွေးနည်းနည်း ပျက်သွားတာပေါ့လေ။
လူတစ်ယောက်စီမှာ ရှိတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်…
လူ၂ယောက်ကြားမှာ ရှိတဲ့ လျှိုဝှက်ချက်…
ကိုယ်စီ ကို ပြန်ဖော်ပြီး လုပ်ကြံတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့်အချင်းချင်း ပြေါတဲ့ ဗီဒီယို ကောတွေ စကားတွေ ဓာတ်ပုံတွေဟာ လေထဲတင်ပျောက်ပျက်သွားတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သတိထားမိတဲ့ အချက်ပေါ့လေ…
ဒါကတော့ ဒီကားမှာ သရဲမ က Access လုပ်နိုင်လို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ တွေးတယ်ပဲထား ….
ဖေ့ဘုတ် ရယ် အဓိက နဲ့
ဂူးဂဲကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ search item တွေကို အီးမေးနဲ့ တွဲမှတ်ထားပြီး ကိုယ်ဘာရှာလဲ မှတ်မိတဲ့ အကြောင်းသာ ချဲ့တွေးကြည့်၊
အေအိုင် လာရင် ဘယ်ပြေးရပါ့ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။
ကိုယ်က အွန်လိုင်းပေါ် နေတဲ့ အမျိုးအစားမို့ ကြောက်ကို သွားတာ။
အွန်လိုင်း ဂျလေဘီ ဘွကို စွန့်လွှတ်ဖို့ မဖြစ်တောင် လျှော့အူးမှဘာ….
အဲဒီကားကို မကြည့်ဖူးပေမဲ့ ကြားဖူး လိုက်တယ် ဇီကလေး ရဲ့။
ဆာဗာ (including email) ရဲ့ Admin အလုပ် ကို လုပ်ခဲ့ဖူးသူမို့ အွန်လိုင်း ရဲ့ ဟောင်းလောင်း ဒိုးယို ပေါက်ကြီး အကြောင်း ကို နားလည်ခဲ့တယ်။
Password ပေးတာ တွေက လယ်ဗယ်တူ များကြားမှာဘဲ သော့ပါတဲ့ တံခါးပါ။
သူထက် မြင့်တဲ့ လယ်ဗယ်ကတော့ ကြိုက်သလို ဖွင့်နိုင်တာပါဘဲ။
ဒါကြောင့် တကဲ့ အရေးကြီး နေရာ Orgazation တွေမှာ ကိုယ်ပိုင်အီးမေးဆာဗာ တွေ သုံးတာပါ။
အခုလဲ Hillary Clinton ရဲ့ own email server ကို FBI က ရှာတော့ အဲဒါကို ပိပိရိရိရိ အမှိုက်ရှင်းထား တွေ့တော့ အဲဒီမှာတင် ပြသနာဖြစ်နေပြီ လို့ ကြားနေတာဘဲ။
US မှာဆို Bomb လုပ်နည်း လိုမျိုး google မိလို့ ရဲ က ချက်ချင်း သိပြီး အိမ်ကို တံခါးလာခေါက်တဲ့ သတင်းကြားဖူးတယ်။
တကယ်တော့ ဟက်ကာ တွေထဲ တကဲ့ ဂျီးနီးယပ်စ် တွေ အများကြီးပါ။
တစ်ချို့လဲ Ethics ရှိပြီး တစ်ချို့လဲ အောက်တန်းစားစိတ် ပေါ့။
တွေးကြောက်မယ် ဆို အားလုံးဟာ အွန်လိုင်းထဲ ကြောက်စရာကြီးဘဲ။
ရုပ်ရှင်ထဲကလို အဖွခံ ရရင် အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အနာမခံ ဘဲ လွှတ်သာ ထားလိုက်သင့်တယ်။
အွန်လိုင်းထဲ အဲလိုဖွတာ တွေ့ရင်လဲ အဖွခံရသူဘက်မှာ အားလုံး ရပ်ပေးရမယ်။
ဖွသူကို ဝိုင်းပြီး ရှုံ့ချကဲ့ရဲ့ရမယ်။
အဓိက သတိထားရမှာက ဆယ်ကျော်သက်တွေပေါ့။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်ထဲ မတော့ ဒါမျိုး တွေ ကို ရှက်တတ်ကြရဲ့လားတောင် မသိ။
ကိုယ့်ပုံ တွေ ကို တောင် public လုပ်တင်နေတာ။
အဖွခံရလဲ နာမည်ကြီးပြီဟ ဆိုပြီးတောင် သဘောကျနေမယ်ထင့်။ lol:-))))
အရီးလတ်တော့.. ဟိုမှာဖက်ကျ.. ကျုပ်ကို.. အလွှာတွေမခွဲရပြောသွားပြီး.. ဒီကျ.. လယ်ဗယ်တွေ.. သူ့ထက်မြင့်တာတွေ.. ဘာတွေ…လာလုပ်နေတယ်….
လူတွေမှာ.. ဂမ္ဘီရဆိုပြီး.. ဂန်ဘီတွေ.. ရနေတဲ့.. မထိ..မစမ်းနိုင်တာတွေရှိသလို…. အင်တာနက်ထဲမလည်း.. မျက်စိရှေ့တွင်ပျောက်နေတဲ့. ဃမ္ဘီရ.လောကကြီးတခုရှိသဗျ..။
ကျုပ်လည်း.. အပေါက်ဝတင်တ၀ဲလည်လည်… မ၀င်တတ်…
တခြား…. ဗမာတွေထဲက..၀င်နိုင်သူများအား..( သော့လိုချင်ပါသဖြင့်…) ချည်းကပ်ဆရာတင်လို…
Tor (anonymity network) – Wikipedia, the free encyclopedia
Tor is free software for enabling anonymous communication. The name is an acronym derived from the original software project name The Onion Router.
Silk Road (marketplace) – Wikipedia, the free encyclopedia
Silk Road was an online black market, best known asaplatform for selling illegal drugs. As part of the Dark Web, it was operated asaTor hidden service, such …
‎The Hidden Wiki – ‎Darknet market – ‎Black Market Reloaded – ‎Operation Onymous
ကျွန်မရဲ့ ဟိုဘက်က မေးခွန်းက “လူ့ အသိဉာဏ် တွေရဲ့ “လယ်ဗယ်တူအလွှာ” ဆိုတာ ကို ဘာနဲ့ တိုင်းပြီး သတ်မှတ် မှာလဲ?” မဟုတ်လား။
ဒီမှာ တော့ လယ်ဗယ် ကို “လုပ်ပိုင်ခွင့်” နဲ့ သတ်မှတ်ထားတာ တွေ့နိုင်တယ်။
ဒီမှာတင် တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသူတွေ ထဲ လဲ အစွမ်းထက်ရင် စည်းဖောက်နိုင်ကြတာပေါ့။
ကျွန်မ တို့ ရွှေ တွေထဲ မှာလဲ နည်းပညာ ပါဝါကြီး သူ တွေ အများကြီး ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခု တက်လူ တွေထဲ မတော့ နည်းပညာ တော်တာ က နဲနဲ သော့ ကို ရနေလို့ လေကျယ် နေတာက များများဖြစ် နေမယ် ထင်ရဲ့။
သူများ ဆီက သင်ပေးလို့ ရလာတာ လေးတွေ နဲ့ အဘများ ကာကွယ်ရေးတွေ အတွက် ကိုဘဲ လုပ်နေတာတွေ ကြားရင် စိတ်မကောင်းဘူး။
အဲဒီလို ဟက်က် လုပ်ဖို့ ရေးထားတဲ့ သူများ software တွေ သုံးပြီး သူတို့ ကို သူတို့ ဟက်ကာ လို့ ထင်ပြီး မာန်ဝင့်နေသူ တွေလဲ ရှိသေးတယ်။
ဟိုတစ်ခါ ရွာ ကို တိုက်သလိုပေါ့။
စိတ်ဝင်စားရင် ၂၀၀၃ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂နှစ်က သတင်းလေး တစ်ပုဒ် ကိုဖတ်ကြည့်ပေါ့။
အခု တော့ သူလဲ အဲဒီလောက ကို ကျောခိုင်းပြီ လို့ ကြားတာဘဲ။
British authorities arrest hacker wanted as `Fluffi Bunni’
Ted Bridis, The Associated Press 2003-04-29
British authorities arrestedaman Tuesday believed to headagroup of hackers known as “Fluffi Bunni,” which usedastuffed pink rabbit to mark attacks that humiliated some of the world’s premier computer security organizations.
Fluffi Bunni captured the attention of the FBI just days after the Sept. 11 terror attacks, when thousands of commercial Web sites were vandalized withasingle break-in that included the message, “Fluffi Bunni Goes Jihad.”
The FBI characterized the act inaNovember 2001 report as an anti-American cyberprotest against the war on terrorism.
Lynn Htun, 24, was arrested by Scotland Yard detectives on outstanding forgery charges while attendingaprominent trade show in London for computer security professionals, InfoSecurity Europe 2003, authorities said.
British authorities did not mention of Htun’s alleged hacking. A U.S. official, speaking on condition of anonymity, said Htun is wanted in America in connection withaseries of high-profile hacking cases blamed on Fluffi Bunni. Investigators believe Htun was the group’s leader and referred to himself as Fluffi Bunni, the official said.
Authorities in London indicated they would release more information Wednesday about Htun’s arrest, although the continuing investigation into Fluffi Bunni hackers was sensitive and other arrests could be possible.
Fluffi Bunni embarrassed leading Internet security organizations by breaking into their own computers and replacing Web pages withamessage that “Fluffi Bunni ownz you” andadigital photograph ofapink rabbit atakeyboard. The attacks, which began in June 2000, lasted about 18 months, then stopped mysteriously and created one of the Internet’s most significant hacker whodunits in years.
“I thought he’d never be caught,” said Jay Dyson,aconsultant who formerly helped run one of the victim Web sites. “He was clever and had the patience ofasaint. The targets he chose were ones that were really high profile, and ones you’d think would be above reproach when it comes to issues of security.”
Victims have included the Washington-based SANS Institute, which offers security training for technology professionals; Security Focus, now owned by Symantec Corp.; and Attrition.org,asite run by experts who formerly tracked computer break-ins. Other victims included McDonald’s Corp. and the online security department for Exodus Communications Inc., now part of London-based Cable & Wireless plc.
“The guy was playingagame of `gotcha.’ He wanted to prove that even firms that specialize in security can be hacked,” said Mark Rasch, chief security counsel for Solutionary Inc. andaformer Justice Department cybercrime prosecutor. “It’s like someone who robs banks to prove that banks can be robbed.”
Brian Martin, who ran the Attrition site with Dyson and others, said Fluffi Bunni quickly generatedafearsome reputation across the underground because of the group’s choice of targets. Martin determined thatahacker broke into another user’s computer, allowing him to assume that person’s digital identity and briefly take over the Attrition site withaFluffi Bunni message.
“He would break into companies that are there to secure you,” said Martin, who never reported the crime to the FBI. “It’sachallenge, and there’s some irony behind it.”
Targets frequently were attacked indirectly. Instead of trying to break into the heavily protected Security Focus Web site, someone hacked an outside computer that displayed advertisements on the site. The ads were replaced with taunting messages and images of the pink rabbit at the keyboard.
သတိလေး နည်းနည်းမှ ကပ်ကပ် ရေးရတာပဲ။
အဲ့ဒီ ဇာတ်ကားကို တခြားဇာတ်ကား သွားကြည့်တုန်းက ရုပ်ရှင်ရုံမှာ နမူနာအဖြစ် အခန်းတချို့ပဲ ကြည့်ရသေးတယ်။
ဒီမှာကတော့ အခွေ အကြည်လည်း မထွက်သေးတော့… အစအဆုံး မကြည့်ရသေးဘူး။
နမူနာလေးတွေ ကြည့်ရသလောက်တော့… ရိုက်ချက်တွေ ဆန်းသစ် တီထွင်ထားတာ တွေ့တယ်… ။
ရုပ်ရှင်လောက သမိုင်းတလျှောက်လုံး ပြ လာတဲ့ ပုံစံထဲက ခွဲထွက်ပြီး ပြချက် အသစ်တစ်ခု ထွင်ပြထားတယ်ထင့်….
.ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်မယ့် ရုပ်ရှင်အဖြစ် စိတ်ထဲ တေးထားတယ်..
ကင်မရာကို ပီစီရှေ့ တည်ပြီး တကားလုံး ရိုက်သွားတာအေ။
သရဲကား ဆိုတာ မေ့ပြီး နည်းပညာ ကို ခေါင်းထဲရောက်ရောက်လာပြီး ပြန်ပြန်စဉ်းစားမိတာ။
အဲ့သည်ကား ဒီမှာရုံတင်နေတယ်။ ဒါမယ့် ကြည့်ရင် အိမ်မှာပဲ အကြည်ခွေဝယ်ပြီး အေးဆေးကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာကြောင့် မကြည့်ရသေးဘူး။ စိတ်ဝင်စားစရာတော့ ကောင်းမှာပဲ။
Rating တော့ သိပ်မမြင့်လှဘူးးး
ဒါပေမဲ့ ကြည့်ပျော်တယ်လို့ ယူဆတယ်။
ကျွန်တော်တော့ ဂိုဂယ် အက်တီဗတီ ကွန်ထရိုးမှာ အကုန် ပေါ့စ် လုပ်ထားတယ်။
Search term, history တွေပေါ့။ ဒါတွေကို ခွဲဖြာပြီးတော့ အချိန်ကိုက်၊ နေရာကိုက်၊ လူကိုက်
ဘာကြော်ညာတွေ ဝင်တုန်းဆို ပိန်ဆေးကြော်ညာတွေ။
အဲ့ဒီ ကား ကို သရဲကား အနေနဲ့လဲ မကြိုက်ဘူး။
နည်းပညာ ဇာတ်ကား အနေနဲ့လဲ တယ် မကြိုက်လှဘူး။ (Mr.Robot ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ကို ပို သဘောကျ)
cyber bully ဆိုတဲ့ message တော့ ရလိုက်တယ်။
အဲ့သလိုဂျီးလား ။ ကို​ကြောင်​ဂျီး ​ရေ့ သတိထားဗျို့ ခင်​ညားဂိုစတ်​ပူဒယ်​
သူ့ ဆိုရင်တော့ ဝိုင်းရိုက်လောက်မယ်။
သူရဲကားတော့ ကြည့်လေ့ ကြည့်ထ မရှိဘူးဗျ…။
ဇာတ်လမ်းကို ကောင်းလှချည်ရဲ့ ပြောတာတော့ ဟုတ်ဘူးဗျ။
ဒီ ကားကြည့်ပြီး ကိုယ်လန့် တဲ့ အကြောင်း ပြောပြတာ။
ဒီကား က လူကြိုက်နည်းတယ်။